प्रकाशित: शनिबार, असोज ३, २०७७, ०७:२८:०० नेपाल समय
राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी संविधानविद् हुन्। नेपालको संविधानका मस्यौदाकारसमेत रहेका अधिकारीसँग संविधान दिवसका अवसर पारेर नेपाल समयका लागि बीपी अनमोलले गरेको छोटो कुराकानी–
नयाँ संंविधानप्रति नागरिकका प्रशस्तै अपेक्षा थिए, ती सम्बोधन भए कि छैनन्?
संविधान आफैंले गुनासो ल्याएको भन्दा पनि संविधानको कार्यान्वयन पक्षमा भएका कमीकमजोरीले गर्दा धेरै गुनासो बढेका छन्। यसलाई सच्याउनुपर्छ।
अर्को विषय, संविधान पाँच वर्ष पुगेर छैटौं वर्षमा टेक्यो। अब यो संविधानमा केके संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले अध्ययन गर्ने बेला आएको छ। त्यसका लागि एउटा आयोग बनाएर काम गर्नुपर्छ।
मधेस केन्द्रित दलहरुसँगै एउटा तप्का अझै पनि संविधानलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार्न नसकिने भनिरहेका छन्। यो विरोध कहिलेसम्म जारी रहला?
अब मधेसको दल भन्ने नै रहेन। सबै राष्ट्रिय पार्टी छन्। जसपालाई भन्न खोज्नुभएको हो भने पनि त्यो पनि मधेसको मात्रै दल रहेन। तर, पनि उनीहरुका गुनासा छन्। संघीयताका सम्बन्धमा उनीहरूका कतिपय गुनासा जायज छन्। ती गुनासा सम्बोधन गरिनुपर्छ।
संविधान कार्यान्वयन र यसको रक्षाको प्रमुख दायित्व सरकारकै हो। यस सन्दर्भमा सरकारका क्रियाकलापलाई कसरी मूल्यांंकन गर्नुभएको छ?
लिखित संविधान भएको मुलुकमा सरकार जहिले पनि चेक एन्ड ब्यालेन्समा चलेको हुन्छ। सिद्धान्ततः सरकार चलेको छु पनि भन्छ। तर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन।
सरकारले संसद्को कुरा पनि कम सुन्छ। संसद्का समितिले दिएका निर्देशन पनि पालना गर्दैन। अदालतको आदेश पनि पालना गरेको छैन। त्यसैले यो सरकार संविधानबमोजिम चलेको छैन।
लुम्बिनीको राजधानी अहिल्यै सारे पनि हामी तयार छौं : नुमानन्द सुवेदी (राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष)
राजस्थानसँग चेन्नई पराजित, आईपीएलबाटै बाहिरिने खतरा
१ 'चाडबाडमा कोरोनाको जोखिम बढ्छ, सावधानी पनि बढाऔं'
२ यस्तो छ मिथिला र मूर्तिपूजाको सम्बन्ध
३ डीडीसी र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमाथि कारबाही गर्न हच्कियो महानगर
४ ‘भेडो काट्ने कार्यक्रम’मा सर्वहारा नेता प्रमुख अतिथि
५ दसैंमा गुञ्जने मालश्री